ओलीको अर्को परीक्षा « Drishti News
ओलीको अर्को परीक्षा
– राजाराम गौतम
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नदब्ने, बलियो अडान भएका नेता भनेर चिनिन्छन् । पार्टी राजनीतिको घेरोमा सीमित उनको यो छवि पहिलो–पटक प्रधानमन्त्री हु‘दा आम भइदियो । नेपालको संविधान जारी गर्दा आफ्नो आग्रह नसुनेकोमा चिढिएको भारतले नाकाबन्दी लगायो । पेट्रोलियम लगायत दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको आयात रोक्यो । दुई ठूला छिमेकीवीचमा रहेको सानो भुपरिवेष्ठित मुलुकका लागि भारत अमानवीय शैलीमा उत्रियो र नाकाहरु ठप्प पार्यो । तर, ओली ‘टसको मस’ भएनन् । बरु चीनसंग पेट्रोलियम ढुवानीसंगै पारवहन सम्झौता गरेर नेपालको विदेश नीतिमा दुरगामी महत्वको कदम चाले । भारतीय प्रभुत्ववादका विरुद्ध नझुकेर आत्मसम्मान जोगाएकोमा ओलीले वाहवाही पाए । राष्ट्रिय नेताको रुपमा उनको छवि बनेको, उनीबाट अपेक्षा बढेको त्यहीबाट हो ।
विवादास्पद महाकाली-टनकपुर सन्धि गराउन भूमिका खेल्ने उनै ओली यतिबेला मुलुकको कार्यकारी छन् । र, उनी सामु नेपाली भूमि रक्षाको दायित्व छ । विगतको त्रुटी सच्याउन र भारतीय अतिक्रमण र हेपाहा प्रवृत्तिलाई कुटनीतिक चातुर्य देखाउदै जवाफ दिने अवसर उनलाई प्राप्त छ । त्यसकारण उनले यो बेला कर्मचारीस्तरबाट समाधान खोज्नेतिर होइन, राजनीतिक तहबाटै समस्याको निप्टारा लगाउन अग्रसर हुनुपर्छ ।
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले जनस्तरमा उर्लेका अपेक्षा पुरा गर्न सकेका छैनन् । एक त उनी आफै रोगसंग लड्दैछन् । शारीरीक रुपमा सक्षम र स्वास्थ्य अवस्था छैन, उनको । त्यसमाथि भर गरेको सल्लाहकार र टिम नै ‘अयोग्य’ भएको निष्कर्षमा उनी पुगेका छन् । आम निराशा बढ्दै जादा उनी सल्लाहकार, सहयोगी मन्त्रीहरु फेर्ने सोचमा रहेको खबर आइरहेका छन् । यतिबेला उनलाई शारीरीक स्वास्थ्य र टिमको योग्यता बढाउने भन्दा ठूलो चुनौती थपिएको छ, नेपाली भूमिको रक्षा गर्ने ।
हालसालै भारतले दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि यो चुनौती थपिएको हो । वास्तवमा यो नयॉ मुद्दा होइन । भारतको मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध राजनीतिक नेतृत्व निरीह बन्नुको परिणाम हो यो । अहिले भारतले नक्सामा समेटेको यो क्षेत्र नेपाली भु–भाग भएको रहस्योद्घाटन सन् १९६२ मै भएको हो, जतिबेला भारतले कालापानीमा पहिलोचोटी सुरक्षापोस्ट राख्यो ।
अध्येता रतन भण्डारीको पुस्तक ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक’ का अनुसार, सन् १९५२ देखि नै अतिक्रमण शुरु भएको हो । दार्चुला जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोसीले २०४५ सालमा गृहमन्त्रालयका पठाएको प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।
यसअघि कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण भएको कुरा २०३० सालमै राष्ट्रिय पञ्चायतमा दार्चुलाका बहादुरसिंह एतवालले उठाएका थिए । तत्कालीन सरकारले त्यो बखत अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्न टोली खटाएको थियो । त्यसैगरी २०३८ सालमा दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्धारिकानाथ ढुंगलले पनि कालापानी क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी उक्त भूमि नेपालकै भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका थिए ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि कालापानी अतिक्रमणको मुद्दा कम्युनिष्टहरुले बोके । खासगरी टनकपुर र महाकाली सन्धि भएपछि कालापानीको मुद्दाले राष्ट्रिय रुप लियो । महाकाली सन्धिको मुद्दामा तत्कालीन एमाले विभाजित भयो । एमालेबाट विभाजित नेकपा मालेले कालापानी अतिक्रमणलाई आफ्नो आन्दोलनको मुख्य मुद्दा बनायो । माले समर्थित विद्यार्थी संगठनले कालापानी पुगेर अतिक्रमणको विरोधमा मार्च नै गर्यो ।
माले समर्थित विद्यार्थीले कालापानी अतिक्रमणको मार्च गरिरहदा यता तत्कालीन एमाले चाहि सन्धि अनुमोदनको उत्साहमा थियो । यतिखेर कालापानी क्षेत्र भारतले नक्सामा समेटिरहदा महाकाली सन्धि अनुमोदनको त्यो ‘खेल’ स्मरण हुन्छ । जतिबेला ओली प्रमुख पात्रका रुपमा देखिएका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित गठबन्धन सरकारको पालामा भारतसंग महाकाली सन्धि भएको थियो । यद्यपि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको एमालेको पूर्ण समर्थन रहेपछि २०५३ असोज ४ गते उक्त सन्धि पारित हुनसक्यो । तत्कालीन एमालेभित्र सन्धिका विषयलाई लिएर यतिधेरै विवाद बढ्यो कि, पार्टी विभाजित भयो । पार्टीभित्र सन्धिको समर्थनमा बहुमत सिद्ध गर्न केपी–माधव समूहको भूमिका थियो । त्यो त्यही बेला थियो, जुन बेला ओली भारतका ‘विश्वासपात्र’ मानिन्थे । भारतमुखी नेताको उनको त्यो छवि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि फेरिएको हो ।
यतिखेर ओलीको फेरि अर्को परिक्षण हुदैछ । सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न प्रयत्नशील ओलीलाई भारतको नयॉ नक्साले चुनौती थपेको छ । भारतीय अतिक्रमण र हस्तक्षेपका दर्जनौं दृष्टान्त छन् । भारतको हेपाहा र दादागिरीबाट नेपालीहरु आहत भएको धेरै काल भइसकेको छ । हु‘दा हु‘दा अब औपचारिक रुपमा नक्सामै देखादेख भूमि हडप्ने प्रपञ्च भारतले रचिरहदा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखतिर सबैका नजर जानु स्वभाविक हो । ओलीले पनि अतिक्रमणको मुद्दा फेरि व्यूतिएपछि साझा धारणा बनाउने अभ्यास थाले, पुर्व प्रधानमन्त्री र सबै दल, विज्ञहरुसंग छलफल गरे । यो सकारात्मक हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो चुनौतीसंगै अवसर पनि हो । त्यो कसरी भने, कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीका रुपमा विगतमा गरेको वाचा पुरा गर्न सक्छन्, उनले । विगतमा कम्युनिष्टहरुले ‘नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत रहेका सबै असमान सन्धि, सम्झौताको खारेजी’ को मुद्दा व्यापक उठाए । भारतीय हैकमवाद र अतिक्रमणको नारा उराले । तर त्यसलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्रै बनाए । असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्नेतिर जुन तहको निडरपन र दवाब आवश्यक पर्छ, त्यो देखाउन सकेका छैनन् । अहिले निडर भएर अतिक्रमण विरुद्ध उभिने बेला आएको छ ।
काली नदिको मुहान लिम्पियाधुरा भएको कुरा अनेक तथ्यले प्रमाणित गरिसकेको छ । तर, ०५३ मै सरकारले मुहानको टुङगो नलगाई सन्धि गर्यो । सन्धि पूर्व मुहान टुङग्याउनेतिर अग्रसर भएको भए अतिक्रमणको मुद्दाले किनारा पाउन सक्थ्यो तर ‘शारदा बॉध, टनकपुर बॉध तथा पञ्चेश्वर परियोजना समेत महाकाली नदिको एकीकृत विकास सम्बसन्धी सन्धि’ भयो । यसले एकातिर विवादित र असमान टनकपुर सन्धिलाई अनुमोदित गरिदियो । जुन सन्धि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएर भारत जादा गरेका थिए । सन्धि गरेर आएपनि उनले संसदबाट अनुमोदित नहुने देखेपछि समझदारी मात्रै भने । पछि सन्धि कि समझदारी भनेर विवाद भयो । सर्वोच्चले सन्धि नै भनेर फैसला गर्यो तर त्यो संसदबाट पारि भएको थिएन । पछि महाकाली सन्धि पारित गर्दा टनकपुरलाई पनि जोडेर पारित गरियो ।
विवादास्पद महाकाली÷टनकपुर सन्धि गराउन भूमिका खेल्ने उनै ओली यतिबेला मुलुकको कार्यकारी छन् । र, उनी सामु नेपाली भूमि रक्षाको दायित्व छ । विगतको त्रुटी सच्याउन र भारतीय अतिक्रमण र हेपाहा प्रवृत्तिलाई कुटनीतिक चातुर्य देखाउदै जवाफ दिने अवसर उनलाई प्राप्त छ । त्यसकारण उनले यो बेला कर्मचारीस्तरबाट समाधान खोज्नेतिर होइन, राजनीतिक तहबाटै समस्याको निप्टारा लगाउन अग्रसर हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ताका लागि वातावरण बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि भारतलाई औपचारिक पत्र लेख्ने, विशेष दुत भारत पठाएर नयॉ नक्साले उत्पन्न गरेको विवादबारे विमर्स अघि बढाउने तर्फ अघि बढ्नुपर्छ । विज्ञहरु चिच्याइचिच्याइ भनिरहेका छन्, हामीसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो भुभाग भएको यथेष्ट प्रमाण छन् । पहिलोपटक जनगणना गर्नुहुने पत्रकार भैरव रिलाल ज्यूदै छन् । अरु कति जिल्ला अधिकारीहरु, सरकारी स्तरबाट भएका अध्ययन, नक्साहरु छन् । सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले खोजेका अभिलेख र नक्साहरु प्रमाणका रुपमा छन् । यी सबै प्रमाणलाई अघि सारेर प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसंग यो अतिक्रमणबारे भयरहित भएर आफ्ना तर्क र अडान राख्नसक्नुपर्छ । द्धिपक्षीय वार्ताबाट समाधान खोज्न भारतले आनाकानी गरेमा यसलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सकिने विकल्पहरु पनि छन् । त्यसर्थ, ओली अग्रसरता अब यतारित हुनु आवश्यक छ ।
भाग्यमानी देखेर, अभागी भोगेर चेत्छ
नेपाल, दुई ढुङ्गाबीचको तरुल होइन, न दुई पिस पाउरोटीका बीचमा पेस्ट गरिने मसालेदार स्याण्डविच नै,
नेकपामा नीति प्रधान कि नेता ?
लक्ष्मण देवकोटा संसदीय अभ्यासबाटै देश दुनियाँ बदलिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने मिन्सेभिकहरुसँग छुट्टिएपछि क्रान्तिपूर्व होँचा
गलत सूचनाको शिकार
माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्दै, पार्टी एकता गरेर दुईतिहाइसहितको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली अहिले
सुध्रिएला नेपाल–भारत सम्बन्ध ?
– रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार) नेपालले सन् १८१६ मा तत्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनीसँग गरेको सुगौली